Ukubekwa Endaweni Ngokusemthethweni – The Ulwazi Programme
Ukubekwa Endaweni Ngokusemthethweni
Ezindaweni zasemakhaya kusenomthetho olandelwayo uma kukhona umuntu okanye umnumzane osuke efuna indawo yokwakha umuzi wakhe, kanti yilezo zindawo ezisuke zisaphethwe ngabaholi bendabuko njengamakhosi, izinduna, izinduna zezinsizwa kanye namaphoyisa ezinduna.
Uma umnumzane efuna indawo kufanele aye enduneni ayocela ukuthi induna imsikele indawo noma isiza sokwakha endaweni ephethwe yiyo. Uma induna ivuma futhi inayo indawo ekhona engasahlali muntu futhi okubonakalayo ukuthi abantu ababekade bakhe kuyo ngeke besabuyela kuyona, ibe leyondawo seyinikezwa umuntu oyidingayo. Kuyenzeka indawo engenamnikazi ingabikhona, induna ibe isigunyaza lowo osuke efuna indawo ukuthi ahambe ayobheka kwabanye abaziyo endaweni ukuthi ngeke yini bamsikele ezindaweni zabo abangasazisebenzisi. Uma eyitholile uzobe esebuyela enduneni eseyofaka isicelo sokubekwa ngokusemthethweni.
Induna izobe isihamba iye eNkosini yendawo ukuyoyazisa ngomnumzane ofuna ukubekwa endaweni yeNkosi ukuze nayo iNkosi yazi ingezwa nje ngabantu. Ukubekwa kubalulekile ngoba usuke sewunesiqiniseko sokuthi indawo sekungeyakho futhi akekho oyokususa kuyo engazange adlule enduneni noma eNkosini, kanti futhi kusiza ekutheni uthi noma uvelelwa inkinga ukwazi ukuyobikela induna bese yona ibikela iNkosi ukuze inkinga ixazululeke.
Ngosuku lokubekwa komnumzane kumenywa amadoda endawo asuke ehambisana nekomidi lenduna, umnikazi wendawo leyo esikelwe owokufika, induna kanye nozobekwa. Umninindawo uye anikwe ithuba lokuthi akhombise abasuke bekhona ukuthi indawo anikela ngayo ingakanani ukuze ozobekwa angagcini esesebenzisa izindawo zabanye abantu ngoba lokho kungadala ingxabano. Uma seyikhonjiwe indawo kufakwa izibonda okuyizona ezizokhombisa kahle ukuthi indawo igcina kuphi.
Uma sekuqediwe lowo ozobekwa ukhipha ikesi likanemenayiti, ikesi likabhiya nebhodlela likagologo kanye nenyama kubongwe ukubekwa kwakhe futhi amukelwe njengomhlali wendawo osezoba yilunga lomphakathi wakulesosigodi. Uma umuntu engabekwanga evele wazakhela nje lokho kuyicala elikhulu, uyahlawuliswa ngokungalandeli imigomo nemibandela yomthetho wendawo. Kuyenzeka umuntu anikezwe abazali bakhe indawo yokwakha yena bese ethatha ngokuthi indawo kayise wakhe nokuthi wayebekiwe. Lokho kwenza ukuthi ugcine ungasangenelwa intuthuko ngoba phela awaziwa njengelunga lomphakathi. Kanti noma uba nenkinga induna ayikwazi ukukusiza ngoba awubekwanga ngokusemthethweni.
Kubalulekile ukubekwa ukuze kuthi noma uxakaziseka endaweni ukwazi ukubika ezinduneni eziphethe. Lena yindlela okuqhutshwa ngayo kuzona zonke izindawo eziphethwe amakhosi kanye nezinduna ikakhulukazi emakhaya.
Categories Culture Tags Clans, Community, Imiphakathi, Isigodi